5 ပဲရစ်စေရန်ကြည့်ရှုခုနှစ်တွင်အများစုကနာမည်ကြီးလမ်းများကို | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ပဲရစ်စေရန်ကြည့်ရှုခုနှစ်တွင်အများစုကနာမည်ကြီးလမ်းများကို
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 11/12/2020)
ပဲရစ်အကြောင်းကိုကိုချစ်ဖို့ဤမျှလောက်ရှိပါတယ်. သင်သည်အဘယ်မှာပင်စတင်ကြဘူး, မှန်သော? စိတ်ထဲမှကြွလာသောပထမဦးဆုံးအရာ Eiffel မျှော်စင်နှင့် Louvre တူသောအကြီးဆိုဒ်များဖြစ်ပါသည်. သို့သော်အဘယ်ကြောင့်လည်းရှာဖွေတွေ့ရှိမဟုတ် ဝှက်ထားသောကျောက်မျက် မြို့ထဲမှာ? ယင်းနှင့်အတူစတင်ကျွန်တော်တို့ကိုစို့5ပဲရစ်စေရန်ကြည့်ရှုထဲမှာအများစုကနာမည်ကြီးလမ်းများကို!
အဘယ်ကြောင့်ကြိမ်မြောက်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးသည်အများစုကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတ Way ကိုရန်ခရီးသွားနှင့်ဤဖြစ်ပါသည်ဆောင်းပါးရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးရေးသားခဲ့သည်နှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်, ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်.
1. ပဲရစ်စေရန်ကြည့်ရှုခုနှစ်တွင်အများစုကနာမည်ကြီးလမ်းများကို: ရိပ်သာလမ်းဗစ်တာဟူဂို
ရိပ်သာလမ်းဗစ်တာဟူဂိုပဲရစ်၏ 16 ကြိမ်မြောက် arrondissement အတွက် Avenue ဖြစ်ပါသည်. မှာစတင် Charles de Gaulle (ထို့အပြင် Etoile အဖြစ်လူသိများ) နှင့် Tattegrain မှာအဆုံးသတ် (Avenue Henri မာတင်ဖြစ်လာ). ဒါဟာ Etoile မှာစတင်မတဆယ်နှစ်လုံးကိုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်, တကျိပ်နှစ်ပါးသောဒုတိယနှစ်ပါးတို့သည်၊, အဆိုပါ Avenue des Champs Elysees ပြီးနောက်.
နာမည်ကျော်ဗစ်တာဟူဂိုပြီးနောက် Named, ဟိုတယ် Particulier မှာမိမိနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလကုန်ဆုံးခဲ့သူ. ဟူဂို၏ရုပ်တု Avenue Henri မာတင်နှင့်အတူလမ်းဆုံမှာတွေ့နိုင်ပါသည်. ရိပ်သာလမ်းဗစ်တာဟူဂိုက၎င်း၏ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကျော်ကြားသည် လှပသောဗိသုကာ ပေါ့ပေါ့အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ပြီးအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအရာဖြစ်ပါသည် အကြီးအ Instagram ကိုရုပျပုံ! အဆိုပါဂရမ်အဘို့ထိုသို့ပြု!
2. ရိပ်သာလမ်း Montaigne
အဆိုပါအော်ပရာ၏ပန်ကာ? ထိုအခါပဲရစ်၌ဤကျော်ကြားလမ်းသငျသညျအဘို့ဖြစ်၏! ဒါကလမ်းပေါ်ကအဆိုပါပြဇာတ်ရုံ des Champs Elysees မှနေရာဖြစ်သည်. အဆိုပါအော်ပရာနှစ်ခုခမ်းနားသံစုံတီးဝိုင်းများ၏မူလနေရာဖြစ်သည်. သငျသညျအနညျးငယျအပိုအချိန်ရှိပါက, ကျနော်တို့ကျိန်းသေဒီသမိုင်းဝင်စွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုအလည်အပတ်ခရီးပေးဆောင်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်နေရာ. ထို့အပြင်, ဒီနည်းလမ်းဟာရန်၎င်း၏အရေးပါပုံကိုများအတွက်လေးစား ဖက်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်း. အတော်များများကကျော်ကြားအမှတ်တံဆိပ် Vuitton အပါအဝင်ကဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်, Loewe, Celine, နှင့်ပိုပြီး.
3. ပဲရစ်စေရန်ကြည့်ရှုခုနှစ်တွင်အများစုကနာမည်ကြီးလမ်းများကို: rue De Rivoli
ပဲရစ်၏စိတ်နှလုံးသို့ရဖို့အဆင်သင့်? သို့ဖြစ်လျှင်ဤလမ်း၏သင့်စာရင်းတွင်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်5ပဲရစ်မှာအများစုကနာမည်ကြီးလမ်းများ! ဒီအမြင့်မားလူနေထူထပ်, ပဲရစ်၏အလယ်တွင်မှတဆင့်လုံ့လရှိသူလမ်းပြေး, မြစ် Seine ဖို့အပြိုင်. Rivoli ၏စစ်တိုက်ခြင်းငှါမှာနပိုလီယံ၏အစောပိုင်းအောင်ပွဲပြီးနောက် Named, ဤလှပသော Boulevard အဆိုပါ Louvre နှင့် Tuileries ဥယျာဉ်မှနေရာဖြစ်သည်. တော်ဝင်နန်းတော်, အဆိုပါ Louvre ့လာမယ့်, အဆိုပါဖြစ်ပါသည် စုံလင်သောအရပျ အဆိုပါ sunlit ဥယျာဉ်၌တစ်ရက်လျှင်ထွက်ခံစားရန်. သငျသညျပဲရစ်၏အဟောင်းများသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်ဘက်တစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းကိုဖမ်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်လက်လွတ်မနေပါနဲ့!
အကြီးအကျယ် Boulevard ကနေအကျဉ်းထွက်ခွာသွားတာကိုဝိုင်းကတဆင့်ပဲရစ်အဓိက၏အဓိကအများစုကြောင်း, ကျမ်းပိုဒ် Couverts တစ်ဦးထက်ပိုသောပျူငှါနွေးထွေးသော option ကိုဖြစ်ကြသည်. ဤရွေ့ကားမိုးစျေးဝယ်လမ်းကြားမြို့မှတဆင့်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ shortcuts တွေကိုအဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ. သငျသညျ quaint ကဖေးရှာတှေ့နိုငျ, အရက်ဆိုင်, ပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့ဈေးဝယ်. မသာကြောင်း, ဒါပေမဲ့အဲဒီမိုးလမ်းကြားမှာရှိတဲ့ဗိသုကာလုံးဝအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုလက်လွတ်မ!
လိုင်ယွန်လေဆိပ်မှ Avignon ရထားများ
5. ပဲရစ်စေရန်ကြည့်ရှုခုနှစ်တွင်အများစုကနာမည်ကြီးလမ်းများကို: Boulevard De Clichy
Montmartre တဦးတည်းမှာပဲရစ်ရဲ့အနုပညာလူအစုအဝေးတစ်ခုအိုအေစစ်ဖြစ်စဉ်းစားခဲ့သည်. ကံမကောင်းသဖြင့်, ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ရလဒ်အဖြစ်ပိုမိုမြင့်မားစျေးနှုန်းများကွဲပြားခြားနားသောရပ်ကွက်သို့အနုပညာရှင်များအများဆုံးနှင်လိုက်. ထိုတွင် Moulin Rouge နှင့် Paris အနီရောင်ခရိုင်၏နေရာဖြစ်သော Boulevard de Clichy ကိုတွေ့နိုင်သည်. သငျသညျတွေကတော့နှင့်အကောင်းတစ်ဦးအချိန်အဘယ်သူမျှမမီတာကိုတွေ့လိမ့်မည်သငျသညျအလည်အပတ်ခရီးဖို့ရှေးခယျြနေ့၏ဘယျအခြိနျ atter. တစ်ဦးပျော်ပွဲရွှင်ပွဲစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်သည့် Moulin Rouge သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့စဉ်းစားပါ!
လမ်းလျှောက်ဖိနပ်သင်အကြိုက်ဆုံးတစ်စုံပေါ်တွင်တင်, နှင့်ကြည့်ဖို့ပဲရစ်ရ5ပဲရစ်မှာအများစုကနာမည်ကြီးလမ်းများ! တစ်ဦးစီးနင်းလိုအပ်ပါတယ်? သငျသညျကိုမေးဘယ်တော့မှမယ်လို့ထင်! ကနေလက်မှတ်ဖမ်းပြီး တစ်ဦးကရထား Save, ယခု. You can book in seconds with no extra or hidden fees.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 ပဲရစ်စေရန်ကြည့်ရှုခုနှစ်တွင်အများစုကနာမည်ကြီးလမ်းများကို” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-streets-paris%2F ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#beautifulstreets europetravel longtrainjourneys trainjourney ရထားအကြံပေးချက်များ travelfrance travelparis